ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် valves.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuaသို့r ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် oအဆိုပါr တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် contတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ efဘို့ts သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း၏ shell ကိုစက်တပ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့ actuator ၏မော်တာမြင့်မားစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
3. ရိုးရှင်းသောလက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ: အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး Spanner နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ITA, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving ့။
Anti-သွန်းခွံမာသီးတိကျ positioning ကိုသေချာစေရန်ပင်ခိုင်ခံ့သောလယ်တုန်ခါမှုအောက်မှာဖြည်ထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။
AOX တစ်ခုသာအစိုင်အခဲ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အမျှအချို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကိုကူညီခဲ့စနစ်များ, တည်စေပြီ။ CNC စက်စင်တာနှင့်အတူတစ်ဦးကတိစက်ပလက်ဖောင်းအဓိကတည်တတ်၏အဖြစ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ actuator စက်တပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်းစိတ်ဝင်စားအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ customers.If ပို reailable ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မယ့်မှတ်တမ်းတင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတည်ထောင်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့် actuator စက်တပ်အရှိဆုံးကျေနပ် AOX-R ကိုစီးရီးဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဝန်ဆောင်မှုမှထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဝယ်ယူရေးအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အဘို့အမှတ်တမ်းတင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထူထောင်ခဲ့ကြ ISO9001 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီတစ်ဦးချင်းစီလင့်ခ်။
A: ပုံမှန် AOX-R ကိုစီးရီးဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကြောင့်အထူးသကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိ actuator စက်တပ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့ actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်